Asus VivoWatch BP: Ny famantaranandro marani-tsaina mandrefy ny fahasalaman'ny mpampiasa | Androidsis
Asus dia manana herinandro mikorontana mialoha, satria mamela antsika vokatra vaovao ny orinasa. Aorian'ny fampisehoana ny finday avo lenta amin'ny lalao dia mitondra antsika ny smartwatch vaovao izao. Ity ny Asus VivoWatch BP, izay famantaranandro somary tsy mampiankina amin'ny fomba sasany. Satria modely mifantoka amin'ny fahasalamana kokoa noho ny manao fanatanjahan-tena izany.
Raha ity Asus VivoWatch BP ity dia mitahiry ny asan'ny mpampiasa, manana asa maro hafa natao hanaraha-maso sy hanatsarana ny fahasalaman'ny mpampiasa. Misongadina indrindra izy amin'ny fahamendrehana izay hifehezany ny fahasalaman'ny kardinaly mpampiasa.
Raha ny famolavolana dia somary diso fanantenana ilay marika. Ity Asus VivoWatch BP ity dia manana dial hafa lehibe tokoa, izay mety hahatonga azy tsy mahazo aina amin'ny fampiasana azy isan'andro. Saingy ny endriny dia iray amin'ireo teboka ratsy vitsivitsy azo apetraka amin'ity famantaranandro ity.
Araka ny efa nolazainay, dia misy asany mifehy ny fahasalaman'ny mpampiasa. Eo anelanelan'izy ireo izy ireo mandrefy ny tahan'ny fo, ny fahasalaman'ny fo ary ny tosidrà. Mba hanaovana izany dia manana sensor optika sy electrocardiogram izy, hita ao anatiny sy ivelan'ny famataranandro. Raha ny marina dia azonao refesina ny tosidranao ao anatin'ny 15 segondra monja.
Ho fanampin'izany, ny Asus VivoWatch BP dia mandrefy ny kalitaon'ny torimaso na ny fahasitranana amin'ny alahelo. Ambonin'ny famantaranandro rehetra natao ho an'ny olona manana olana ara-pahasalamana, indrindra ny aretim-po. Satria izy io dia hanampy antsika hitazona fifehezana mazava tsara ny fanjakan'ity olona ity amin'ny fotoana rehetra. Inona koa, miavaka satria miaraka amina fiampangana tokana dia maharitra 28 andro ny bateria.
Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ny daty hahatongavan'ity Asus VivoWatch BP ity any Espana, tena tsy fantatsika raha halefa izy io. Na dia antenaina ho toy izany aza. Momba ny vidiny, Tombanana eo amin'ny 150 - 160 euro izy io. Saingy, tsy manana fanamafisana momba izany izahay. Manantena izahay fa handre anao tsy ho ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Asus VivoWatch BP: Ny smartwatch vaovao mandrefy ny tosi-dranao
Unboxing sy ny fahatsapana voalohany an'ny MyGica ATV1960, TV BOX avo lenta izay tena tsara dia tsara
Alao amidy ny Galaxy S8 + miaraka amin'ny tahan'ny Endless Yoigo